Budata Recuva maka Windows
Free Budata maka Windows (7.30 MB)
Recuva bụ mmemme mgbake faịlụ nefu nke dị netiti nnukwu ndị na-enyere ndị ọrụ aka iweghachi faịlụ ehichapụ na kọmputa gị. Maka ụzọ ọzọ ka mma ma zuru ezu, ịnwere ike ịnwale EaseUS Data Recovery ozugbo.
Ọkachamara data Iweghachite EaseUS, nke dị na ikuku ruo afọ 17, na-arụ ọrụ niile Recuva nwere ike ịrụ. Na mgbakwunye, ọ na-enye ọtụtụ nkọwa dị iche iche nke Recuva na-enweghị ike ime. Ebe ọ bụ na ọ bụ ngwa ọhụụ ọhụrụ, ọ nwere atụmatụ bara uru. Isi ihe mere anyị ji akwado ya dị ka onye ọzọ na Recuva bụ na ị nwere ike mfe ịchọta faịlụ. Na EaseUS interface, ọnọdụ nke faịlụ ahụ dị nihu gị ma ị nwere ike ịhụ ngwa ngwa faịlụ ịchọrọ ịchọta faịlụ dị na ya.
Ọ na-nwere ohere na-agbake ehichapụ faịlụ site na mpụga diski. Nihi nke a, ọ bụghị naanị na kọmputa gị; I nwekwara ike chọọ nime ngwaọrụ dịka HDD, USB Memory. EaseUS nwere ike iweghachite ụdị faịlụ dị iche iche dịka akwụkwọ, foto, egwu na ozi ịntanetị. Mkpokọta ọnụ ọgụgụ nke faịlụ ọ nwere ike naghachi bụ na 100. Dịka eziokwu, ọ dị nihu Recuva site na ịnye ọtụtụ atụmatụ dị iche iche na ikpokọta ihe niile nokpuru otu ụlọ. Nwere ike ịga nadres a ugbu a iji nwalee ya.
Nwere ike i scanomi maka faịlụ ehichapụ na kọmputa gị site na enyemaka nke ọkachamara na mmemme, nke ị nwere ike ịmalite iji mgbe a dị mfe nwụnye nzọụkwụ.
Na Recuva, nke so na ngwanrọ na-aga nke ọma ị nwere ike iji weghachite faịlụ ndị ị na-ehichapụ na kọmputa gị na mberede ma ọ bụ na-akpachaghị anya, ị nwere ike i scanomi maka foto ehichapụ, ụda, akwụkwọ, vidiyo, faịlụ abịakọrọ na ozi ịntanetị site na kọmputa gị. Dị ka a Nihi nke Doppler, faịlụ na ị nwere ike naghachi ma ọ bụ egweri ga-depụtara maka gị. Nụzọ dị otú a, ị nwere ike ịnweta ohere iji megharịa faịlụ ị chọrọ ngwa ngwa.
Site na mmemme a, nke na-enye ndị ọrụ ya ụdị nyocha abụọ dị iche iche iji weghachite faịlụ ndị ehichapụ, ị nwere ike ịme nyocha nke obere oge maka faịlụ ehichapụ, yana ịme nyocha miri emi dị ogologo. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta faịlụ ịchọrọ ị gbakee dị ka nyocha nke isi, nhọrọ nyocha miri emi ga-enye gị ohere ịchọta faịlụ ndị ị na-achọ.
Na Recuva, nke na-enye gị ohere i toomi diski dị nime kọmputa gị yana diski mpụga ị ga-ejikọ na kọmputa gị, ị nwekwara ike weghachite data ehichapụ na diski mpụga gị ma ọ bụ kaadị SD.
Ná ngwụsị nke usoro nyocha ahụ; Ọ bụrụ na ịhọrọ faịlụ onyonyo ọ bụla na windo nke faịlụ ndị nwere ike ịchọta, ị nwere ike ịlele obere nyocha nke faịlụ onyonyo ahụ ka ị nwee ike ikpebi faịlụ ndị ịchọrọ iweghachite karịa.
Na mmechi, ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme iji weghachite faịlụ ehichapụ na kọmputa, Recuva kwesịrị ịbụ otu nime ngwanrọ mbụ ị kwesịrị ịnwale.
Recuva na-eme nyocha abụọ, mgbake nkịtị na nyocha miri emi, iji weghachite faịlụ ehichapụ, weghachite data. Nyocha mbụ ahụ nyochara kọmputa gị wee chọọ faịlụ nke Recuva nwere ike ịgbalị ịgbake. Nyocha nke abụọ wee nyochaa faịlụ ndị a iji gbakọọ ihe gbasara nke puru inwe mgbake nke ọma. Ọ bụrụ n ịkwụsị nyocha izizi ka ọ na - aga nihu, Recuva agaghị egosi ozi ọ bụla gbasara faịlị ndị ahụ. Ọ bụrụ na ịkwụsị nyocha nke abụọ ka ọ na-aga nihu, ịnwere ike ịlele faịlụ Recuva na-achọta, mana ozi ọkwa agaghị abụ nke ziri ezi dịka nyocha zuru ezu ga-eweta. Ugbu a, ka anyị lee usoro mgbake ahụ;
Nkịtị mgbake: Oge mbụ ị hichapụ faịlụ, Windows agaghị overwrite nna ukwu Njikwa Isiokwu ntinye ruo mgbe ị na-eji faịlụ ahụ ọzọ. Recuva-enyocha kwa na Master File Isiokwu maka faịlụ akara dị ka ehichapụ. Ebe ọ bụ na a na-emezigharị ntinye ihe ntinye ederede Master Master maka faịlụ ehichapụ (gụnyere mgbe ehichapụ faịlụ ahụ, etu o si buru ibu, na ebe ọ dị na draịvụ ike), Recuva nwere ike ịnye gị ndepụta zuru oke nke ọtụtụ faịlụ ma nyere gị aka weghachite ha. Agbanyeghị, mgbe Windows kwesịrị ịmepụta faịlị ọhụụ, ọ na - eweghachi ma na - edebanye ihe ntinye ihe ntinye aha Master Master yana oghere dị na draịvụ ike ebe faịlụ ọhụrụ bi. Nke a pụtara na ngwa ngwa ị kwụsịrị iji kọmputa gị wee gbaa Recuva, ọ ga-aka adịrị gị mma ịgbake faịlụ gị.
Usoro nyocha miri emi: Usoro nyocha miri emi na-eji Master File Table iji chọọ faịlụ na ọdịnaya nke ụgbọala ahụ. Recuva na-enyocha ụyọkọ (blọọgụ) nke ọkwọ ụgbọ ala ịchọta faịlụ isi faịlụ na-egosi na faịlụ na-agba ọsọ. Ndị isi ndị a nwere ike ịgwa Recuva aha faịlụ na ụdị (eg, JPG ma ọ bụ DOC faịlụ). Nihi ya, nyocha miri emi na-ewe ogologo oge. E nwere ọtụtụ puku ụdị faịlụ na Recuva nwere ike ịmata ndị kachasị mkpa. Deep Scan nwere ikike iji weghachite ụdị faịlụ ndị a:
Foto: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF
Microsoft Office (tupu 2007): DOC, XLS, PPT, VSD
Vidio: MOV, MPG, MP4, 3GP, FLV, WMV, AVI
Ebe nchekwa: RAR, ZIP, CAB
Filedị faịlụ ndị ọzọ: PDF, RTF, VXD, URL
Ọ bụrụ na faịlụ ahụ adịghị ekewa na draịvụ ahụ, Recuva agaghị enwe ike ịgbakọta ya na ịkọwapụta ga-emetụta usoro mgbake ahụ nụzọ dị njọ.
Naghachi faịlụ ehichapụ na Recuva
Recuva Ọkachamara malite na ndabara mgbe ị na-amalite Recuva na-eduzi gị site na faịlụ mgbake usoro. Yabụ ihe niile ị ga - eme bụ ịgafe usoro ndị a ma nọdụ ala.
Naanị pịa bọtịnụ na-esote iji nọgide na ihuenyo mbụ.
Youchọrọ ịgbake faịlụ niile na nzọụkwụ nke abụọ nke ọkachamara ma ọ bụ ịchọrọ ị gbakee otu ụdị faịlụ? jụrụ gị ịkọwapụta. Onye ọ bụla nke faịlụ edemede na-egosiputa naanị faịlụ na-eji ndị na-esonụ extensions:
Faịlụ niile: Nke a na - achọ faịlụ niile na nsonaazụ faịlụ, nagbanyeghị ụdị faịlụ.
Foto: Nke a na - achọ JPG, PNG, RAW, GIF, JPEG, BMP na TIF faịlụ.
Egwu: Nke a na-achọ MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, M4A, FLAC, AIF, AIFF, AIFC, AIFR, MIDI, MID, RMI na MP2 faịlụ.
Akwụkwọ: Nke a na-enyocha DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX na ODC faịlụ.
Video: Nke a na-egosi AVI, MOV, MPG, MP4, FLV, WMV, MPG, MPEG, MPE, MPV, M1V, M4V, IFV NA QT faịlụ.
Abụọ: Nke a na-egosi ZIP, RAR, 7Z, ACE, ARJ na CAB files.
Ozi ịntanetị: Nke a na-egosi EML na faịlụ PST.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbake faịlụ na-enweghị otu nime ndọtị ndị a, ị ga-ahọrọ faịlụ niile.
Ọkachamara kpaliri gị ịkọwapụta ebe ehichapụ faịlụ ndị mbụ na ọkwa a. Ọ bụrụ nịhọrọ My Documents, Recycle Bin, ma ọ bụ na ebe a kapịrị ọnụ, Recuva ga na-enyocha ọnọdụ ahụ ị kọwapụtara kama inyocha draịva niile maka faịlụ ehichapụ.
Ugbu a ị dịla njikere ịchọ faịlụ ehichapụ. Iji malite usoro nyocha, pịa bọtịnụ Malite.
Nha faịlụ: 7.30 MB
Mmepụta: Piriform Ltd
Recuva bụ mmemme mgbake faịlụ nefu nke dị netiti nnukwu ndị na-enyere ndị ọrụ aka iweghachi faịlụ...
EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition bụ mmemme mgbake faịlụ na -enyere ndị ọrụ aka iweghachite...
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike wepụ anya faịlụ ndị dị mkpa maka ọrụ gị, ezinụlọ gị ma ọ bụ gị. Ọ bụrụ na...
Digital Video Mmezi ngwa-enye gị ohere ịrụzi gị mebiri emebi video faịlụ dị nnọọ ole na ole clicks....
Ime Anwansi Partition Recovery bụ mmemme nke nwere ike iweghachite faịlụ ehichapụ ma weghachite...
Mgbe ị na -eji ngwaọrụ iOS gị, mgbe ụfọdụ ihe mberede nwere ike ịdakwasị gị ma ị nwere ike tufuo...
FreeUndelete என்பது நீக்கப்பட்ட கோப்புகளை மீட்டெடுக்க நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இலவச தரவு...
Site na nbudata Windows Recovery Recovery, ị nweta Microsoft na free faịlụ mgbake mmemme na gị...
iBeesoft Data Recovery bụ 100% mma data mgbake omume na ọtụtụ nde ndị ọrụ. Ọ bụ usoro mgbake data...
Iweghachite faịlụ Yodot bụ mmemme mgbake faịlụ na -akwado sistemụ niile site na Windows XP ruo...
Pocket WhatsApp bụ mmemme mgbake faịlụ na -enyere ndị ọrụ aka weghachite ozi WhatsApp ehichapụ wee...
Ndozi faịlụ Stellar bụ otu nime mmemme ị nwere ike iji rụzie ma weghachite faịlụ Microsoft Office...
WhatsApp Extractor bụ mmemme mgbake faịlụ nke ị nwere ike iji weghachite ozi WhatsApp echekwara na...
Tenorshare WhatsApp Recovery bụ mmemme mgbake ozi WhatsApp ehichapụ nke na -enyere ndị ọrụ aka na...
iMyFone D-Back iPhone Data Recovery bụ usoro mgbake data dị elu nke dị ka onye ọrụ iPhone na iPad...
Active Boot Disk bụ mmemme okike diski mgbake bara uru nke na-enyere ndị ọrụ aka mgbake sistemu....
Gihosoft Free gam akporo Data Iweghachite na-ewere ọnọdụ nahịa dị ka ngwa / mmemme mgbake faịlụ gam...
Ị nwere ike ịrụkwa faịlụ oyiyi mebiri emebi ma ọ bụ mebiri emebi site na iji Njikwa faili Hetman....
Tenorshare Free WhatsApp mgbake bụ ngwa mgbake mkparịta ụka WhatsApp ehichapụ na-enyere ndị ọrụ iOS...
Recoverit dị mfe ma dị ike data mgbake software maka Windows. Wondershare Recoverit, nke na-enyere...
M3 Format Iweghachite nefu bụ mmemme mgbake faịlụ na-akwụghị ụgwọ nke na-enye ndị ọrụ ohere...
Ashampoo Photo Recovery, dị ka ị nwere ike ịkọ site na aha ahụ, bụ mmemme ị nwere ike iji...
Wondershare Data Recovery bụ a faịlụ mgbake omume na-enye ọrụ a ngwọta naghachi ehichapụ faịlụ....
Stellar Phoenix Windows Data Recovery bụ mmemme mgbake faịlụ na-enyere ndị ọrụ aka iweghachi faịlụ...
DMDE, dị ka mmemme dị mgbagwoju anya, na-enye gị ohere iweghachi faịlụ gị furu efu ma ọ bụ...
iSkysoft Android Data Iweghachite bụ mmemme dị mfe iji na-enye gị ohere iweghachite data gị niile,...
NTFS Undelete bụ ngwa njikwa diski efu maka iweghachi faịlụ ndị ehichapụrụ na draịvụ ike gị. Ekele...
ReclaiMe bụ mmemme na-aga nke ọma nke ị nwere ike iji weghachi faịlụ ndị ehichapụrụ na mberede ma ọ...
Gihosoft iPhone Data Recovery bụ mmemme mgbake faịlụ iPhone efu nke ị nwere ike iji nwetaghachi...
GetDataBack abụghị naanị iweghachi sistemụ atụgharị, faịlụ ehichapụ ma ọ bụ mgbake faịlụ. Ihe ọ...